इलोन मस्कले अमेरिकी कामदार किन काम चोर हुन्छन् भने ? - Aarthiknews
इलोन मस्कले अमेरिकी कामदार किन काम चोर हुन्छन् भने ?
एजेन्सी । टेस्लाका सीईओ इलोन मस्क यतिबेला लगातार चर्चामा छन् । हरेक दिन उनी केहि बोल्छन् वा लेख्छन् जसबाट उनकै विषयमा छलफल सुरु हुन्छ । उनको पछिल्लो भनाइ पनि फरक छैन । इलोन मस्कले हालै चीनका अमेरिकी कर्मचारी र कर्मचारीका सम्बन्धमा चर्चा चुलिएको छ ।
इलोन मस्कले आफ्नो वक्तव्यमा चीनका कर्मचारीहरूलाई निकै मेहनती भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । फाइनान्सियल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा, मस्कले चीन उत्पादनमा धेरै निर्भर हुने सुपर प्रतिभाशाली, मेहनती मानिस भएको भन्दै चर्चा गरेका छन् ।
मस्कले फाइनान्सियल टाइम्सलाई भनेका छन्, ‘चीनका जनता बिहान ३ बजेसम्म काम गर्छन् र कारखानाबाट बाहिर ननिस्कन, काम गरिरहन्छन् भने अर्कोतर्फ अमेरिकाका जनता कामबाट टाढिन खोज्छन् । इलोन मस्कका अनुसार चीनमा कामदारको प्रकारलाई हेर्दा देशले केही धेरै सक्षम कम्पनीहरू उत्पादन गर्ने आशा समेत गरेका छन् ।